ခဲဂွန်ရေတံခွန် - ဝီကီပီးဒီးယား
華厳滝 - Kegon Taki
Kegon Falls and Lake Chūzenji
Nikkō National Park, Tochigi Prefecture, Honshū, Japan
36°44′17″N 139°30′09″E﻿ / ﻿36.73806°N 139.50250°E﻿ / 36.73806; 139.50250ကိုဩဒိနိတ်: 36°44′17″N 139°30′09″E﻿ / ﻿36.73806°N 139.50250°E﻿ / 36.73806; 139.50250
၉၇ မီတာ (၃၁၈ ပေ)
၇ မီတာ (၂၃ ပေ)
ခဲဂွန်ရေတံခွန် (華厳滝, Kegon Taki) သည် ဂျပ်နိုင်ငံ၊ တိချိဂိစီရင်စု၊ နစ်ခိုးမြို့အနီးတွင်တည်ရှိသည့် နစ်ခိုးအမျိုးသားဥယျဉ်ရှိ ချူးဇင်းဂျိကန်တွင် တည်ရှိသည့် ရေတံခွန်တစ်ခု ဖြစ်သည်။ ချူးဇင်းဂျိကန်၏ ရေအရင်းအမြစ်သည် အိုရှိရိမြစ်မှ ဖြစ်သည်။ ဒိုင်းယမြစ်မှ ချော်ရည်များသည် လမ်းကြောင်းလည်ကာ စီးဆင်းရာမှ ရေတံခွန်သည် ဖြစ်ပေါ်လာသည်။ အဓိကရေတံခွန်သည် အမြင့် ခန့်မှန်းခြေ ၉၇ မီတာ (၃၁၈ ပေ) ရှိပြီး သေးငယ်သည့် ရေတံခွန် ၁၂ ခုခန့်သည် ခဲဂွန်ရေတံခွန်၏ နောက်နားတွင် တည်ရှိသည်။ ရေတံခွန်သည် တောင်နှင့် ချော်ရည်များကြားမှ များစွာသောအက်ကြောင်းများကြားမှ စီးဆင်းလျက်ရှိသည်။
ဆောင်းဦးရာသီတွင် နစ်ခိုးမှ ချူးဇင်းဂျိသို့သွားသည့် လမ်းသည် တစ်ခါတရံ လည်ပတ်သူများက ရေတံခွန်၏ အရောင်အသွေးကို ကြည့်ရှုရန် လာကြသဖြင့် သွားလာမှု နှေးကွေးခြင်းများ ဖြစ်ပေါ်သည်။
၁၉၂၇ ခုနှစ်တွင် ခဲဂွန်ရေတံခွန်သည် ဂျပန်နိုင်ငံရှိ အကောင်းဆုံး “ရှုခင်းရှစ်ခု” ထဲမှ တစ်ခုအဖြစ် သတ်မှတ်ခြင်း ခံခဲ့ရပြီး ရှောေခတ်ကာလ ယဉ်ကျေးမှုများကိုလည်း မြင်တွေ့ရနိုင်သည်။ ဤရေတံခွန်သည် ၁၉၉၀ ခုနှစ် ဂျပန်နိုင်ငံ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဝန်ကြီးဌာနမှ ထုတ်ပြန်ခဲ့သည့် “ဂျပန်နိုင်ငံရှိ အကောင်းဆုံး ရေတံခွန် ၁၀၀” တွင် ပါဝင်သည်။
ခဲဂွန်ရေတံခွန်သည် ကိုယ့်ကိုယ်ကို သတ်သေမှုဖြစ်စဉ်များကြောင့် နာမည်ဆိုးဖြင့် ထင်ရှားသည်။ အထူးသဖြင့် ဤဖြစ်စဉ်များသည် ဂျပန်လူငယ်များအကြားတွင် ထင်ရှားသည်။
Video of the falls in winter
Death poem of Misao Fujimura.
မိဆအိုဖုဂျိမုရ (၁၈၈၆ - ၂၂ မေလ ၁၉၀၃) သည် ဂျပန်လူမျိုး ဒဿနိကဗေဒကျောင်းသားနှင့် ကဗျာဆရာတစ်ဦး ဖြစ်ပြီး သူရေးသားခဲ့သည့် နှုတ်ဆက်ကဗျာသည် ကြီးမားစွာပင် သတိတရ ဖြစ်ခဲ့သည်။ သူ၏ ထိုကဗျာကို ရေတံခွန်မှ ခုန်ချ၍ မိမိကိုယ်ကို သတ်မသေခင် သစ်ပင်၏ ပင်စည်ပေါ်တွင် လက်တန်းရေးဖွဲ့သည်။
ထိုကဗျာသည် မကြာမီပင် စာရေးဆရာဖြစ်သည့် နဆုမဲ ဆိုးဆဲခိ ၏ မှတ်ချက်ပေးမှုကြောင့် သတင်းစာများတွင် ကျော်ကြားလာခဲ့ပြီး ကျော်ကြားလာခဲ့သည်။ ထိုအရာကပင် သဘာဝအလှကြောင့် ထင်ရှားသည့် ရေတံခွန်သည် သမီးရည်းစားဖြင့်ပြတ်စဲသူများနှင့် အခြားသော ဆိုးသွမ်းသည့် လူငယ်များသည် သူတို့၏ ဘဝများအတွက် နာမည်ဆိုးဖြင့် ကျော်ကြားလာခဲ့သည်။
Tourism website for Kegon Falls (in ဂျပန်)
↑ 日本八景(昭和2年)の選定内容. Ministry of the Environment of Japan. Retrieved on March 3, 2012. (in ဂျပန်)
↑ "Lake Chūzenji"။ Encyclopædia Britannica။ 2011။ October 13, 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Iga, Mamoru (1978). "Suicide in Japan". Social Science & Medicine. Part A: Medical Psychology & Medical Sociology 12 (4): 507–16. doi:10.1016/0271-7123(78)90118-9. PMID 734468. p. 519
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ခဲဂွန်ရေတံခွန်&oldid=607295" မှ ရယူရန်
ဂျပန်ဘာသာစကား ရင်းမြစ်များ ပါဝင်သော ဆောင်းပါးများ (ja)
ဤစာမျက်နှာကို ၂၅ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀၊ ၀၇:၃၅ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။